Dil Iyo Dagaal Ka Dhacay Magaalada Muqdisho. – Calamada.com
Dil Iyo Dagaal Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
calamada February 12, 2019 1 min read
Howlgaladan oo isugu jira Igtiyaal iyo dagaal toos ah waxey ciidamada Mujaahidiinta ka fuliyeen xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay la beegsadeen Sarkaal iyo maleeshiyaat ka tirsan Kooxda Ridada Somalia.
Howlgalka hore oo dagaal toos ah waxey ciidamada Mujaahidiinta ku qaadeen fariisin maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka sameysteen Xaafadda Furayaasha ee degmada Wardhiigley.
Dagaalkaasi ayaa la isku adeegsaday hubka nocyadiisa kala duwan iyadoo dhawaaqa rasaasta Xaqqa iyo Baadilka ay is weydaarsanayeen si aad ah looga maqlayay xaafadaha magaalada Muqdisho.
Dagaalkan ayaa khasaara kala duwan lagu gaarsiiyay maleeshiyaatkii Murtadiinta ee Fariisinka ku lahaa Furayaasha Wardhiigley.
Howlgalka Labaad oo ahaa Mid Igtiyaal Dil ah waxey ciidamada Mujaahidinta ka fuliyeen xaafada Kaabo Gudey ee degmada Dharkenley waxeyna halkaasi Mujaahidiinta ku dileen Sarkaal ka tirsan Kooxda Ridada.
Murtadkan ay ciidamada Mujaahidinta ku dileen degmada Dharkenleey ayaa lagu magacaabi jiray Abshir Muxiyadiin Aw-cali kaasi oo ahaa sarkaal ka tirsan Milatariga Murtadiinta.
Howlgaladan ka kala dhacay degmooyinka Wardhiigley iyo Dharkenley ayaa kusoo aadaya xilli ciidamada Mujaahidiinta ay sii Labo laabeen weerarada ay ku dhiig bixinayaan Kufaarta iyo Murtadiinta ee ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho waxeyna Saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta gudaha degmada Hodan ku dileen Cali Canshuur oo ahaa sarkaal ka tirsan Booliska Kooxda Ridada Somalia.
Previous: Malleeshiyaadka Khaliifa Xaftar Oo Dilay Aqoonyahan Liibiyaan Ah Oo Ku Jiray Gacantooda.
Next: Xasan Dheere Oo Lagu Dilay Degmada Hodan.